Chimwezve chinhu: Apple pakupedzisira inopa iyo iPhone X | IPhone nhau
Ngirozi Gonzalez | | iPhone
Icho chaive chakavanzika chekuchema. Mushure mekuzivisa iyo iPhone 8 uye iPhone 8 Plus, Apple yakaunza iyo iPhone X, chishandiso chatanga tichitaura nezvayo kwemwedzi, chishandiso chinorangarira chegumi chegumi cheiyo smartphone yakachinja Apple, nevashandisi vayo. Uye zvave zvine chimwezve chinhu ...
Sezvataitarisira, chinonyanya kushamisa ndeichi kuwedzera kwescreen, kubvisa ese ari maviri epamusoro uye ezasi mativi uye, chokwadika, iyo yekubata ID pazasi pane iyo Touch ID sensor yaive. Iyo skrini ine zviyero zve 5,8 inches ne 458 pixels pa inch, chidzitiro chikuru chechigadzirwa chikuru.
1 Iyo iPhone X, chakavanzika chakavhurika chakazopedzisira chaziviswa
2 Mitengo uye kuwanikwa kweiyo iPhone X
Iyo iPhone X, chakavanzika chakavhurika chakazopedzisira chaziviswa
Iyo iPhone X skrini ndeye Super Retina kuratidza game OLED tekinoroji, skrini ine zviyero zve2436 x 1125 iyo ine mikana mikuru yatinozoongorora gare gare. Uye zvakare, inopokana ne mvura neguruva. Kune rimwe divi, kupera kweiyo iPhone X kuri sirivheri uye nzvimbo pfumbu. Pane akasiyana matekinoroji pachiratidziro cheiyi iPhone asi chakanyanya kukosha kusanganisa tekinoroji yeOLED muApple smartphone.
Iyo itsva iPhone X ine tekinoroji Dolby Vision, HDR10, 1: 1 miriyoni musiyano, Chokwadi Toni uyezve, 3D Touch sevatangiri vayo. Kupedzisa kweshure kwakafanana neiyo iPhone 4 uye iyo nyowani iPhone 8: kristaro.
Kubviswa kwebhatani reKumba kwaita iyo iPhone nyowani isu tinogona kuivhura kuinhonga kubva patafura, kana kungoibata chete, kusanganisa musono neIOS 11. Kutanga kubva pafungidziro yekusavapo kweBhatani repamba, Apple yaunza Chiso ID, iyo nyowani iPhone X yekuvhura system.
Zvekushanda chaiko kweiyi tekinoroji, huwandu hukuru hwema sensors nemakamera anodikanwa, kuwedzera kune iyo A11 Neural Injini chip, kukwanisa kushanda pamwe neural network uye kudzika mepu kushanda nezviso kunyangwe murima.
Iyi yekuchengetedza system inodzivirirwa neiyo Yakachengeteka Enclave system uye inogona kushandiswa kupfeka zvishongedzo zvakaita semagirazi, ngowani ... zvese zvinovakirwa pane neural network iyo yatakaudzwa nezvayo mune yakakosha. Uye zvakare, hazvisi chete zvakakosha kusimudza nekumisikidza iyo iPhone kuvhura iyo system, asi iwe unofanirwa kuteerera kune mudziyo, kudzivirira kusabatika kusingafungidzirwe. Kana iyo mudziyo ichibatwa pamberi pechiso pasina maziso akatarisa pachiratidziri, Chiso ID hachimiririwe.
Kuchengetedzwa kwe Face ID iri kumusoro kwazvo (1/1 miriyoni) kupfuura yakatangira iyo Touch ID (1 / 50.o00) uye inogona kushandiswa ne chechitatu-bato maapplication uye Apple Bhadhara.
Chimwe chisvinu icho isu taitoziva kuti ndicho emojis, kuti isu tinokwanisa kugadzirisa needu kumeso maficha uye nekuvatumira kune akasiyana maficha senge iMessages, yakanyatsochinjika kumeso kumeso. Around makamera, inogona kushandiswa nezvimwe zvinoshandiswa sezvakaratidzwa ne Snapchat
Iwo maviri kumashure makamera eiyo iPhone X akavandudza: hombe, mafirita matsva emuvara, kugadzikana kwemaziso mumakamera maviri uye kugadzirisa mune yakaderera mwenje mamiriro. Uye zvakare, iwo ma sensors 12 megapixels izvozvi zviri kukurumidza.
Nhau dzese dzakaziviswa kune iyo iPhone 8 uye iPhone 8 Plus kutenderedza portrait mode zviripo zveiyo X X: dzakasiyana portrait modes yezviitiko zvinoshamisa, nekuda kwechip A11 Bionic. Chitsva ndechekuti iyo yekumberi kamera yeiyo iPhone X zvakare ine portrait modhi.
Bhatiri ndechimwe chezvinhu zvakurukurwa. anopfuura maawa maviri akareba kupfuura iPhone 7. Mafungu aridza mhere muSteve Jobs Theatre, asi kuzvimiririra kweichi chishandiso kuchafanirwa kuyedzwa kuti vaone zvine simba kana izvo Apple zvatichataura ichokwadi.
Kunge iPhone 8 uye iPhone 8 Plus, iyo iPhone X ine waya isina waya. Izvo zvinoenderana neQi standard, saka, iwo majaja anowirirana neiyi tekinoroji zvakare anoenderana kubhadharisa nyowani Apple iPhones. Asi pamusoro pezvo, Apple yakaunza isina waya yekuchaja base inonzi AirPower.
Mitengo uye kuwanikwa kweiyo iPhone X
Pane masimba maviri: 64 GB y 256 GB mutengo kubva 999 madhora. Uye iyo iPhone SE ($ 349), 6S uye 7. Vanogona kubhukirwa kubva 27 yeOctober uye ichatengeswa kubva 3 waNovember.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Chimwezve chinhu: Apple pakupedzisira inosuma iyo iPhone X
Iko kuongorora kwakazara, nekuti hauise CV yako muAI. Ivo zvechokwadi vachakubhadhara iwe.
Ini ndingaite zvirinani pane vamwe vanyori pane ino blog!
Ngatione, ndizvo zvandaitarisira, pakange pasina kana kushamisika muKeynote. Maonero angu nezve iPhone X akapfupikiswa nemazwi maviri: akanaka uye anodhura.
Ini ndoda kuve nemodel iyoyo, asi kwete pamutengo iwoyo uye zvishoma pamutengo uyo uchazotengeswa pano. Saka kubvira gore rino ini ndiri kuronga kumutsiridza yangu yazvino iPhone 5s, ini zvechokwadi ndinosarudza iyo iPhone 7 ikozvino zvadzikira mumutengo kana kunyangwe ma6s.
Pamutengo weiyo iPhone X unogona kutenga maviri maApple 7s, iri hafu yakachipa uye une foni kwemakore. Ichokwadi kuti haina kuvhura kumeso, asi chokwadi ndechekuti zvinoita kunge pijama uye ini handizvione zvichidikanwa. Ehe, ini ndaizosuwa dhizaini nyowani, zvinova ndizvo zvandaifarira zvakanyanya.
Nezve iyo iPhone 8 ini handitombo funga nezvayo nekuti iri € 200 inodhura kupfuura iyo 7 uye nyaya yekuchaja isina waya haina chikonzero chekuwedzera kwayo. Dhizaini yacho yakafanana.
Saka hapana, kumirira kuti uzive mutengo wairi kutengeswa pano (zvirokwazvo unopfuura € 1000) uye uine 95% mukana wekuti ini ndichasarudza iyo iPhone 7.
Ruben Inestroza akadaro
hahahahah apuro ndinofunga rakapenga ndine iPhone 6 uye ndanga ndakamirira kweanoda kusvika makore matatu kuti iyo iphone itsva ibude ndakafunga kuti maererano ne aesthetics zvaizochinja pakati pe3 ne7 asi ini ndinoona izvozvo vakasiya zvese pa iPhone X kuti chokwadi Chakanakisa asi ndinofunga mutengo wayo unodhura, ndinofunga ndichaenda kune iyo iPhone 8 pamwe kana ndikazogara neyakajairwa yese iri nani pane iyo 8
Pindura Ruben Inestroza
Iyo iPhone 8 ine 3-gore-rekare dhizaini uye iPhone x ine mutengo wakanyanyisa wemazana zana nemakumi masere neshanu euros iyo yakakosha muSpain haina musoro, mushure memakore gumi ndichishandisa iyo iPhone neichi chisina musoro maneja ndinoti kuonekana nePhones ini handisi kuenda tenga iPhone ine dhizaini yemakore matatu nekuvandudza kusanzwisisika, ndoda iyo iPhone x ye1159 euros iyo chinhu chega chinonakidza kuvhura nechiso uye skrini zvinowedzera chimwe chinhu chisingareverere mutengo wakakwira kupfuura 10 euros muchidimbu KUSIMBISA APPLE
Kuvhurwa kweFace Id hakukurumidze, kwete kureva kuti yakundikana ka2 mumharidzo.
Tichafanirwa kuona ongororo, asi sekutaura kuri kuita munhu wese …… .carrrriiiiisiisiimooo !!
Zvakadaro ini ndichibhejera zai, kuti iwo mamirire ezvinyorwa zvekutenga achazosvika kuMars.
Dai iyo iPhone X yakaunza maAirPods kana waya isina waya yekuchaja seyakajairwa, ingadai iri imwe nyaya uye pamwe ndingadai ndakafunga nezvazvo, asi zvinoita $ 1159.
Ini ndinofunga inoshamisa foni, asi havazobhadhare iyo itsva Apple Park nemari yangu ...
Ini ndinofunga chimwe chinhu, kuti vanyori veiyi blog vagadzire saiti nyowani, Android News uye ngatiendei tese ikoko, zvirokwazvo Apple yarasa kambasi, foni ye1000 USD yechinhu chitsva che dhizaini uye kuvhura kumeso, ini handioni mukana pamusoro peiyo id id inoshanda nekuibata chete!, ndeupi mutengo wakawedzerwa ??? Nezve dhizaini, ini handikwikwidze kuti yakanaka asi haina nani kupfuura LG V30, S8 Plus, Cherechedzo 8, Mi Mix 2, kutaura mashoma uye nemutengo wakaderera, kunze kwekunge nehephonephone jack kune avo vedu vanofarira mimhanzi ine mhando yakanaka. odhiyo, ini handinzwisise Apple, hazvina musoro!
Nei vakabvisa iyi positi kubva papeji rekutanga?
watchOS 4 ichavandudza mashandiro emoyo